Tari-dalana Toriteny Alahady 19 Novambra 2017 (Alahady 23 manaraka ny TRINITE) – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Tari-dalana Toriteny Alahady 19 Novambra 2017 (Alahady 23 manaraka ny TRINITE)
Miarahaba antsika rehetra indray amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo. Indro atolotra anareo indray ny tari-dalana momba ny texte izay ho toriana manerana ny sahan’ny FLM amin’ny Alahady faha-19 Novambra ho avy izao (Alahady XXIII manaraka ny Trinite). Mirary soa indrindra Tompoko.
Tamin’ny Alahady lasa teo (XXII manaraka ny Trinité) dia ny famelankeloka na ny fifotoran’ny fifamelankeloka izay ifanaovan’ny samy mpino Kristiana amin’ny Famelankeloka izay nataon’Andriamanitra tao amin’i Jesosy Kristy no hafatry ny Tenin’Andriamanitra tamintsika. Azo lazaina fa tsy dia mifanalavitra amin’izany loatra ny hafatr’ity perikopa izay anjarantsika ity, eny, na dia misy hafatra hafa mihitsy koa aza izay azo sintomina avy aminy. Tamin’ny Alahady lasa teo dia ny fiaimpiainan’ny mpino ao amin’ny Fiangonana izay manana an’i Jesosy eo anivony no nampitain’ny texte. Izay hitantsika eto amin’ity texte izay anjarantsika androany ity koa dia karazan’olona anankiroa (mpanankarena maromaro sy mananontena mahantra anankiray) mivory sy manao zavatra eo anatrehan’i Jesosy Kristy. Raha ny famelankeloka no hafatry ny texte tamin’ny Alahady teo dia ny zavatra tokony hiseho eo amin’ny mpino Kristiana manoloana an’i Jesosy mialohan’izany kosa no ambaran’ity texte izay anjarantsika androany ity raha vakiana amin’izany solomaso izany izy. Ahoana izany?
Ny texte eo alohany (12:38–40) dia miresaka indrindra ny amin’ny mpanora-dalàna sy ny fisehosehoany imasom-bahoaka ny amin’ny fanamarinan-tenany ary filazana ny fanamelohana azy amin’izany. Hitantsika eto amin’ity texte anjarantsika ity koa izany fitiavana te-hoderaina imasom-bahoaka fa olo-marina izany. Teo amin’ny Jiosy fehizany manko ny fananan-karena dia noheverina fa mariky ny fankasitrahan’ Andriamanitra manokana dieny ety an-tany ny olona anankiray noho ny fahamarinany (ampit. Ilay lehilahy nanankarena te-hoderain’i Jesosy imasom-bahoaka fa olo-marina mendrika handova ny Fanjakan’Andriamanitra ka mody nametraka taminy ny fanontaniana hoe: “inona no hataoko handovako ny fiainana mandrakizay”, Mat. 19:16–22; Mar. 10:10–31; Lio. 18:18–30). Ny fahantrana kosa, mifanohitra amin’izany, dia noheverina fa mariky ny fanamelohan’Andriamanitra ny olona anankiray noho ny tsy fahamarinany. Araka izany, izay nataon’ireto mpanankarena ireto dia ny fitiavana te-naneho ny refin’ izany fahamarinany izany teo imason’i Jesosy tamin’ny alalan’ny fitahàny tamin’ity mahantra mananontena ity ary nataony izany ho fitadiavana ny fiderana na fankasitrahana avy tamin’i Jesosy. Tsy nandrefy ny fahamarinany tamin’ny alalan’ny fitahàny tamin’i Jesosy izay teo anivony anefa izy ireo fa tamin’ny alalan’ny fitahàny tamin’ity vehivavy mahantra izay noheverina fa voahelok’Andriamanitra ity kosa.
Efa misy hafatra ho antsika sahady izany ry havana. Izay rehetra manamarina ny tenany na izay mihevitra ny tenany fa tsara sy marina noho ny hafa noho fitahàny amin’ olombelona mitovy aminy dia ho tafalatsaka avokoa amin’ny fahalavoan’ireto mpanankarena ireto. Tsy hahalala ny tenany ho olo-meloka mihitsy eo anatrehan’ Andriamanitra ny olona tahaka izany, noho izany dia olona tsy hiaiky ny helony eo anatrehan’ Andriamanitra, ary raha izany dia tsy hahazo ny famelankeloka avy Aminy. Rentsika saiky isaky ny Alahady fa “izay miaiky ny helony no havelan’Andriamanitra izay mahatoky sy marina amin’ny helony” (1 Jao. 1:9). Kanefa izay hahay sy ho resy lahatra hiaiky heloka dia izay manatrika sy mitaha amin’i Jesosy irery ihany. (Tantara momba ny tovolahy iray sy ny fitaratra voalohany: ny fitaratra no nampiaiky azy fa olona ratsy tarehy izy). Matetika anefa dia isika efa Kristiana, mpanompon’Andriamanitra toy ny Mpiandry, Pastora sns. no tafalatsaka amin’ity fahalavoan’ny mpanankarena eto amin’ ny texte ity. Noho izany dia isika indrindra no antsoina hanatrika sy handrefy ny fahamarinantsika amin’ny alalan’ny fitahàna amin’i Jesosy fa tsy amin’ny olombelona hafa mitovy amintsika mba hampiaiky antsika fa olo-meloka mila ny famelankeloka avy Aminy isika.
Na dia tsy marina aza fa noho ny fahotany manokana no nampahantra ity mananotena ity dia nekeny kosa ny maha mpanota azy manoloana an’i Jesosy Kristy. Ny fanolorany ny fananany rehetra ho rakitra ho an’Andriamanitra eto dia azo adika ho fanankinany izay mahasoa ny fiainany rehetra amin’Andriamanitra. Azo adika ihany koa fa symbolin’ny fanolorany izay nananany rehetra, dia ny fahotany (ampit. ny fahantrany, ny alahelony) ho an’i Jesosy izany satria mino izy fa Jesosy izay natrehany dia hanome azy ny vaovao ho solon’izany dia ny famelankeloka sy ny haren’ny lanitra na ny famonjena azy izany.
Ry havana, “Izay manafina ny fahotany (noho fanamarinan-tena na noho ny fitokisan-tenany) dia tsy hambinina; fa izay mitsotra ka mahafoy azy (manontolo kosa) no hahazo famindrapo” avy amin’Andriamanitra (Ohab. 28:13). Noho izany, aza manafina ny fahotantsika amin’ny alalan’ny fanamarinan-tena noho fitahàna amin’ny hafa namanao fa aleo mampiharihary izany manontolo kosa amin’ny alalan’ny fitahàna na fanatrehany ny hazofijalian’i Jesosy dia hahazo izany famindrapon’Andriamanitra izay hamela ny helokao ao Aminy izany ianao.
Voninahitra anie ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena.
Betsaka ny mametra‐panontaniana mahakasika ity Rafitra ao amin’ny Fiangonana ity, anisan’izany ity fanontaniana ity : « Iza no mba afaka manazava misimisy kokoa ...Hanohy hamaky
Ny Baiboly sy ny Homosexualité
Ho valin’ny fangatahana tato amin’ny ZFLM momba ny resaka ny amin’ny “Homosexualité” dia, mandray anjara amin’ny fizarana tandrify antsika ny amin’ny fampianaran’ny ...Hanohy hamaky
Avia fa Tia anao Jesosy
TENA TIAN'I JESOSY IANAO, ZANAKA MALALA, TSY FOINY FA SAROBIDY LOATRA AMINY « Ary ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo, ary miverena ...Hanohy hamaky
Akon’ny Isantaona faha-34 Toby LOVASOA Antohomadinika - Annexe Tobilehibe FARIHIMENA
MISAOTRA AN'I JESOSY, fa tontosa soa aman-tsara t@ 8,9 ary 10 Jona 2017 lasa teo ny ISANTAONA FAHA-34 Toby LOVASOA Antohomadinika, Annexe ...Hanohy hamaky